Kuchenesa Franchise Yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Kuchenesa Franchise
Featured Kushambidzwa Franchises
Kuchenesa Kwazvino Franchises
Tekinoroji yakatanga kutengeserana muna 1983 uye vava vatungamiriri veku UK vanotungamira muhurongwa hwehutsanana. Tekinoroji inogona kuiswa nyore seimba ...
Nguva Yei Iwe Franchise
"Nhasi takachenesa dzimba 17, YET haana kumbobva pamba pedu!" Fungidzira iwe uine purani yekuchenesa dzimba, fungidzira iwe uchiwana mari inosvika zviuru makumi matanhatu nemazana emadhora pamari ...
Ruzhinji rwevanhu mazuva ano ari germaphobic uye ichi ndicho chikonzero kudikanwa kwebasa rekuchenesa mabasa kuri kuwedzera kumusoro gore rega rega. Saka iwe unogona kunge uchifunga iwe pachako kuti urege kujoina iyi indasitiri inokura nekukurumidza?
Statistics kutenderedza indasitiri yekuchenesa.
Zvino ini ndichagovera humwe huwandu hwakaunganidzwa kutenderedza indasitiri yekuchenesa mukati memakore apfuura kuratidza kuti iyo indasitiri yakanaka kwazvo kuti ibatanidzwe.
Kubva 2010 chikamu chekuchenesa chaona kuwedzera kwe21% kuburitswa muUK - chiverengero chiri pedyo nekushomeka nepasi rose.
Iri indasitiri yekuchenesa muUK yashanda vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe. MuUSA, kune vanhu vanopfuura mamirioni mazana maviri ezviuru vanoshanda muvashandi yekuchenesa, uye kudiwa kwepasi rese nekuda kwekuchenesa mabasa kwakakura.
Maererano neshumo neMTW Tsvaga iyo kontrakiti yekuchenesa chibvumirano yakakosha kudarika £ 3bn kuhupfumi hweUK.
Kuchenesa kuchagara kuchikosha kwazvo munyika dzese dzepasi. Chikamu icho chisingazombofi chakafa.
Izvo zviri pachena kuti kune kudiwa kwakanyanya kwazvo kwekushambidzira masevhisi kwete muUK uye USA asi pasi rese. Iva iyo yekuchenesa macomputer machipurazi akadai seTekinoroji, kune yekuchenesa dzimba uye hofisi yekuchenesa masevhisi, ikozvino ndiyo nguva yakakwana yekutora mukana uyu musika unobatsira.
Bhurawuza kuchenesa mafurati uchishandisa Franchiseek nhasi.
Kana iwe uchitsvaga yakanakisa yepasirese yekuchenesa Franchise mikana. Ipapo ini ndinokuraira zvikuru iwe uve nekutsvakisisa kwakanaka kuburikidza nekuchenesa chikamu chedu chekuchengetedza machinda kuti uwane mukana wekutengesa unozove wakakukodzera. Zvakare kana usiri fanika weyenzi yekuchenesa kunyangwe ichikurumidza kukura mumakore apfuura. Ipapo ini ndinokurudzira kuti uongorore kuburikidza neFranciseek's yose Franchise dhairekitori inopa yakakura yakawanda inonakidza mikana yefrancise.